KITRA AMBOARAN’NY 26 JONA : Nobatain’ny FC Vim Fokontany Vinaninkaren ny Amboara
Anisan’ny nanamarika ny Fetim-pirenena tao amin’ny Kaominina Vinaninkarena ihany koa ny famaranana teo amin’ny baolina kitra izay niadiana ny amboaran’ny 26 jona 2017, izay nandraisan’ny fokontany 9 anjara. 29 juin 2017
Ny FC Vim sy Tsaratanàna no nifandona teo amin’ny lalao famaranana ka nivoaka ho mapndesy rehefa nandresy tamin’ny isa 2 noho 0 ny FC Vim.
Vola mitentina 60 000 Ariary niampy akanjo fanaovam-baolina sy baolina no azon’izy ireo tamin’izany raha 40 000 ariary miampy baolina iray sy akanjo filalaovam-baolina no azon’ny mpilalao avy ao amin’ny Fokontany Tsaratanàna. Ankoatra izay dia nahazo fanomezana ihany koa ireo niady ny laharana faha-3 sy faha-4.Marihana fa ny Depioten’i Madagasikara, Ravelohanitra Nirina, voafidy tao Antsirabe Faharoa no nanome ireo loka lehibe ireo. Fa ankoatra izay dia nahazo vola ihany koa ny Kartie mobila izay niandraikitra ny fandriampahalemana nandritra ny Fetim-pirenana. Nahazo ny anjarany ihany koa ny mpikaraka ny lalao sy ny mpitsara baolina kitra.
Nambaran’ity olom-boafidy ity fa vonona ny hanampy hatrany ny mpanao fanatanjahantena eo anivon’ny Distrika ny tenany.
Efa hanomboka afaka roa volana indray mantsy ny fifaninana hiadiana izay ho tompondakan’ny Distrika izay hifanandrinan’ny Kaominina rehetra mandrafitra an’
Antsirabe Faharoa, ka izy no hanolotra ny amboara sy hikarakara ny lalao rehetra. Nomarihany fa tsy maintsy hanangana ekipa iray matanjaka afaka hifaninana amin’ny faritra hafa manerana ny Nosy ny Distrikan’antsirabe 2 noho ny fananany tanora maro sy tia ny taranja baolina kitra.
Mifanandrify indrindra amin’ny filàn’ny tanora izany satria vitsy tokoa ny Malagasy afaka mampivoatra tanora, tahaka ny Depiote Ravelohanitra Nirina.